Hooyo Ilmihii Ay Dhashay Ku Iibsatay £70 Oo Kaliya Iyo Waxa Ku Kalifay | Ceerigaabo News
Hooyo Ilmihii Ay Dhashay Ku Iibsatay £70 Oo Kaliya Iyo Waxa Ku Kalifay
Dec 30, 2020 Bishii la soo dhaafay, qeybta baaritaannada ee BBC Africa Eye, ayaa daaha ka qaadday suuq madow oo carruurta lagu kala iibsado oo ku yaalla caasimadda Kenya, Nairobi.
Booliiska ayaa markii sheekadan la baahiyay ka dib xiray toddoba qof oo lagu eedeeyay in ay carruurta ka ganacsadaan, balse waa sidee xaaladda haweenka kale ee ku shaqada leh heshiisyadaas sharci darrada ah? Maxaa ku kallifaya hooyo in ay cunuggeeda ku iibiso £70?
Nolosha Adama way fududeyd markii ay la joogeen waaliddiinteeda, sida ay sheegtay. Helitaanka lacag way adkeyd, ikhtiyaar badanna ma lahayn.
Iskuul ayay dhiganeysay wayna ku qanacsaneyd. Walwal badan ma heysan. Ka dib aabbaheed ayaa geeriyooday markii ay jirtay 12 sano, hooyadeedna sanado ka dib ayay dhimatay.
“Noloshu aad ayay u adkaatay,” ayay tiri, iyadoo ku sugan tuuladeeda oo ku taalla miyiga galbeedka Kenya. “Waxaan ku qasbanaaday in aan iskuulka ka baxo oo aan nafteyda u shaqeysto.”
Markii ay 22 sano jirka ahayd, Adama waxay is barteen nin uur ayayna qaadday, balse saddex maalmood ka dib markii ay gabadhooda dhalatay ayuu geeriyooday ninka.
Waxaa ku sii xoogeysatay cidlada ay dareemeysay. Gabadheeda oo xanuunsan ayay nuujin jirtay ilaa caafimaadkeeda uu ka soo hagaagay, markii ay gaartay 18 bilood, ka dib waxaa loo baahnaa dhaqaale ay noloshooda ku dabbaraan. Sidaas darteed, Adama waxay gabadheeda uga tagtay ayeydeed oo da` ahayd waxayna aadday Nairobi si ay shaqo uga hesho.
Adama ayaa timid Nairobi waxayna bilowday in ay qare ku iibiso waddada, balse kuma filneyn, qofka ay guriga isla degganaayeen ayaana ka xadi jirtay lacag walba oo ay guriga uga tagto.
Nolosha magaalada aad ayay sidoo kale u adkeyd. Dhaawac ayaa uga yaalla foolka hore ee wejiga kaas oo soo gaaray iyada oo nafteeda difaaceysa. “Ragga qaar ayaa ila ciyaarayay, waxay markii dambe gaartay inaan is difaaco,” ayay tiri.
Waxay markaa ka dib shaqo ka bilowday meel dhisme ka socday, halkaas oo aan laga siin jirin wax lacag ah, sidoo kale baararka habeenkii ayay ka shaqeyn jirtay iyada oo qofkii madaxda u ahaa u sheegtay in lacagta uu si toos ah ugu diro ayeydeen tuulada joogta.
Muddo kaddib, Adama waxay guri ka kireysatay Nairobi si ay ugu noolaato. Waxay shaqo ka yara fiican teedii hore ka heshay goob dhisme kale ah, nin ayayna halkaas kula kulantay. In muddo ayay sheekeysan jireen wuxuuna u sheegay inuu doonayo ilmo.
Adama waxay la gashay heshiis — haddii ay gabadheeda soo kaxaysan karto oo ay la noolaan karto iyaga, markaas ilmo kale way u dhali kartaa.
Wuu ka oggolaaday, markii ay Adama lahayd uur shan bilood ah wuxuu bixin jiray kirada iyo biil raashiinna wuu keeni jiray guriga, Adama waxay sugeysay xilliga saxda ah ee ay gabadheeda keeni karto magaalada. Kaddib maalin ayuu iska tegay dibna uma soo laaban.
Haween badan way ogaan doonaan walaaca ka dhalanaya isu diyaarinta inaad ilmo keento dunidan adiga oo aan heysan lacag lagu quudiyo hal qof iskaba daa labo qof’e.
Intooda badan marnaba qorshaha uguma jirto inay ilmahooda ka iibiyaan qof aysan aqoon. Balse haweenka qaar oo uur leh isla markaana ay saboolnimo ku heyso Kenya, inay ilmahooda ka iibiyaan kuwa carruurta ka ganacsada wuxuu u yahay ikhtiyaarka ugu dambeeya ee ay noloshooda ku badbaadinayaan.
Kuwa ilmaha ka ganacsada waxaa la yaab leh inay bixiyaan lacag aad u yar. Sarah waxay jirtay 17 sano markii ay yeelatay uurka ilmaheeda labaad, iyada oo aan heysan wax ay siiso cunuggeeda, sida ay sheegtay. Waxay ka iibisay haweeney siisay 3,000 oo shilinka Kenya ah – oo u dhiganta £20.
“Markaas waan yaraa, uma maleyneyn waxa aan sameynayo inay yihiin khalad,” ayay tiri. “Kaddib shan sano waan ka xumaaday arrintaas, waxaana doonayay inaan u celiyo lacagteeda.”
Waxay sheegtay inay ogtahay haween kale oo ilmahooda ku iibiyay lacag taas la mid ah.
“Gabdho badan ayaa ilmahooda u iibiya sababo la xiriira caqabado heysta. Waxaa laga yaabaa in hooyadeed ay guriga ka soo cayrisay oo aysan waxba heysan, amaba ay weli iskuul dhiganeysay markii ay uur yeelatay. Taasi dhibaato weyn ayay ku tahay gabar jirta 15 ama 16.
“Waxaad arkeysaa gabdho luminaya cunuggooda iyo wax walba oo ay heystaan sababtoo ah ma jiro ced gacan qabaneysa.”
Kenya waxay ka mid tahay meelaha ugu badan Afrika ee ay ka jiraan gabdhaha yaryar ee uurka yeesha, khubarrada caafimaadka ayaana sheegay in dhibaatada ay ka sii dartay inta lagu jiro xanuunka safmarka ah ee coronavirus, iyadoo haweenka qaar ay ku qasbanaadaan inay jirkooda ka ganacsadaan si ay noloshooda ugu dabbaraan sidoo kale gabdhaha ayaa ka habsaamaya iskuulka.
“Waxaan maqlay sheekooyin badan oo ku saabsan haween iyo gabdho xaaladdan ku jira. Haween da` yar ayaa yimaada magaalada iyaga oo shaqooyin raadinaya, waxay yeeshaan xiriir, uur ayay qaadaan, aabbaha ilmahooda ayaana dayaca,” ayay tiri Prudence Mutiso, oo ah qareen xuquuqda aadanaha oo Kenya ku sugan kuna takhasustay dhowridda carruurta iyo xuquuqda taranka.
“Haddii uusan aabbuhu lacag bixin, haweenkan iyo gabdhahan waa inay helaan siyaabo kale oo ay dakhli ku helaan, sidaas darteed waxay helayaan dakhli ay ku caawiyaan naftooda iyo tan carruurtooda u joogta deegaankooda. Dadku arrintan si furan ugama hadlaan, balse way jirtaa.”
Adama muddo dheer ayay qarisay uurkeeda iyada oo ku sugan goobta dhismaha, ilaa ay awoodi weyso inay qaaddo baco culus oo shamiindo ah amaba ay qariso caloosheeda. Kaddib ma heli karin lacag ay kirada isaga bixiso. Muddo saddex bilood ah, qofka guriga mas`uulka ka ahaa ayaa axsaan u sameeyay, kaddib wuu ka bixiyay guriga.
Markii ay lahayd uur siddeed bilood ah, Adama ayaa bilowday inay usoo dhacdo guriga xilli dambe habeenkii si ay u seexato subixiina ay uga tagto.
“Maalintu markay fiican tahay waxaan nasiib leeyahay markaan cunto helo,” ayay tiri. “Mararka qaar waxaan cabi jiray biyo, waan duceysan jiray, waana seexan jiray.”
Xarunta caafimaadka ee Mary Auma ma aha dhabtii xarun caafimaad, waa labo qol oo ku yaalla dhabarka dambe dukaan ku yaalla waddada Kayole. Gudaha waxaa ku yaalla qaanado ay badankood maran yihiin oo ay qaarkoodna saaran yihiin dawooyin duug ah, waxaa ka dambeeya qolal ay haweenku ku dhalaan. Auma ayaa gudaha la fadhisa kaaliyaheeda, iyada oo iibsaneysa iskana iibineysa ilmaha si ay lacag uga hesho, iyada oo aan eegeynin cidda iibsaneysa iyo sababta.
Waxay Adama u sheegtay in dadka iibsanaya ay yihiin waaliddiin fiican oo aan awoodin inay ilmo dhalaan, kuwaas oo korin kara cunug. Balse xaqiiqdii Auma waxay ilmaha ka iibineysay cid walba oo u timaadda oo lacag fiican heysata. Auma ayaa sidoo kale hooyooyinka uurka leh u sheegta inay tahay umuliso hore, balse ma heysato qalab caafimaad, xirfad amaba xaalad ay kula tacaasho dhibaato khatar ah oo timaadda xilliga dhalmada. “Xarunteedu wasakh ayay ahayd, weel yar ayay u isticmaashaa dhiigga, ma heysato beeshin, sariirtuna ma ahayn nadiif,” Adama ayaa sidaas sheegtay. “Balse waan niyad jabsanaa, ma lahayn ikhtiyaar.”
Markii ay Adama timid xarunta caafimaadka, Mary Auma waxay siisay labo kaniini oo foosha soo dedejiya iyada oo aan digniin siin, Adama ayaa sidaas sheegtay. Auma waxay heysatay macmiil iibsanaya cunugga waxayna ada u dooneysay inay iibiso. Balse markii ay Adama ilmo dhashay, cunugga oo wiil ahaa waxaa la soo dersay xanuun xabadka ah wuxuuna u baahnaa daryeel degdeg ah, Auma ayaana Adama u sheegtay inay isbitaal geyso.
Kaddib toddobaad ay isbitaalka ku jirtay, Adama iyo wiilkeeda oo caafimaad qaba ayaa la soo saaray. Ninkii guriga lahaa ee markii ay uurka lahayd ka saaray ayaa oggolaaday inay soo laabato oo ay ilmaha nuujiso. Wax yar kaddib markii ay Mary Auma kula kulantay suuqa, sida ay sheegtay, Auma ayaa siisay 100 shillin oo kale waxayna u sheegtay inay maalinta xigta ugu timaaddo xarunta.
“Ilmo kale ayaa la dhalay,” Auma ayaa farriin qoraaleed ugu sheegtay qofka ka iibsanaya. “45,000k.”
Mary Auma ma aysan siineyn Adama 45,000 oo shilin — £300 — waxay soo xiganeysay qofka iibsanaya. Waxay Adama siisay 10,000 — oo u dhiganta £70. Balse Mary Auma ma aysan ogeyn qofka iibsanaya inuu ahaa weriye is qariyay oo la shaqeeya BBC, tan oo qeyb ka ah baaritaan sanad socday oo lagu sameynayay ilamah laga ganacsado.
Markii Adama ay aadday xarunta caafimaadka, qolka dambe ayay fadhiisatay, iyada oo wiilkeeda ku heysa gacmaheeda. Wada hadal dheer kaddib, qofkii doonayay inuu ilmaha iibsado ayaa u sheegtay inay u heyso ikhtiyaar kale, Adama isbeddel ayaa ku yimid. Waxay maalintaas xarunta ka tagtay iyada oo heysata wiilkeeda, waxayna u qaadday xarun ay dowladda maamusho oo carruurta lagu daryeelo, halkaas oo lagu daryeeli doono ilaa laga helayo qof korsada oo lagu aamini karo. BBC ayaa weydiisay Mary Auma inay ka jawaabto eedeymaha ku saabsan sheekadan, balse way diidday.
Adama hadda waa 29 jir, waxayna ku laabatay tuuladii ay ku soo kortay. Weli mararka qaar waxay seexataa iyada oo baahan. Noloshu way adag tahay weli. Waxay mararka qaar shaqo ka heshaa hoteel u dhow balse kuma filna. Waxay iska celisaa inaysan khamro cabin. Waxay ku riyootaa inay furato dukaan u gaar ah oo kabaha lagu iibiyo oo tuulada ku yaalla kabahana ay u iib geyso Nairobi, balse waa riyo fog. Wax xiriri ah lama laha wiilkeeda, balse kama shallaayneyso.
“Kuma faraxsaneyn inaan iibiyo cunuggeyga, xitaa ma dooneyn inaan taabto lacagtaas,” ayay tiri. “Haddii aysan lacag ku shaqo laayn inaan iska dhiibo, wax dhib ah kuma qabin.”
Way taqaannaa deegaanka xarunta carruurta ee ay wiilkeeda uga soo tagtay. Wuxuu u dhow yahay gurigii laga soo saaray markii ay dhali rabtay. “Waan ogahay inay meeshaas ammaan tahay,” ayay tiri, “dadka xannaaneynayana waa dad wanaagsan.”